पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 06 2018 |3मिनेट पढ्न
ज्योतिष, एक नेटल चार्ट भनिन्छ कुरा पनि छ. यो मूलतः ग्रह र अन्य आकाशीय शरीर को सबै तपाईं जन्मनुभएको स्थान देखि आफ्नो जन्म को क्षण मा हो राशि मा सही स्थान को एक फोटो छ. यो एक नक्शा जस्तै छ, आफ्नो जीवनको विभिन्न पक्षमा आफ्नो व्यक्तित्व बाहिर बिछाउने र तपाईं चाहनुहुन्छ के देखाउने / आवश्यकता. हरेक Venus प्रेमको ग्रह छ भनेर थाह, र त्यो आफ्नो जन्म मा मा स्थित दशकको चिन्ह तपाईं प्रेममा आवश्यकता के अन्तरदृष्टि दिन सक्छ. आफ्नो Venus तपाईं के भन्नुहुन्छ? (तपाईं आफ्नो Venus चिन्ह खोजन आवश्यकता, यहाँ क्लिक).
मेष मा Venus: तपाईं चासो पकड गर्न सक्छन् जो कुनै आवश्यकता, वा तपाईं छिटो मा कदम. तिनीहरूले आफ्नो जोश मेल गर्नुपर्छ, र जीवनको बारेमा उत्साहित. तपाईं धेरै संभावित केटा आकर्षित गर्न सक्छन्, तपाईँ चाहनुहुन्छ के मा केन्द्रित छैन भने तर तपाईं चाँडै तिनीहरूलाई माध्यम ले जाने. तपाईं सधैं भन्ने ब्रान्ड-नयाँ भावना छ तीव्र आवश्यकता विगतमा प्राप्त गरेको छ.
Taurus मा Venus: तपाईं कुनै स्थिर र जिम्मेवार आवश्यकता. तिनीहरूले जङ्गली र अनियमित हुनुहुन्छ भने, तपाईं अन्य तरिका चलाइराख्नु. तपाईं जीवन मा बेहतर कुराहरू तिमी एक सानो लूट व्यक्तिलाई चाहन्छु, र व्यक्तिलाई आफ्नो कामुक प्रकृति मेल गर्न सक्छन्. एक साथी छान्दा तपाईं आफ्नो समय ले, र कुल प्रतिबद्धता माग. पनि possessive वा डाह भएकोमा हेर्नुहोस्.
मिथुन मा Venus: तपाईं सबै अरू माथि मानसिक उत्तेजना आवश्यकता. के तपाईं कसैसित राम्रो कुराकानी गर्न सक्दैन भने, तपाईं भौंतारिन्छन् छौँ. तपाईं रोचक छ जो कुनै आवश्यकता, एक बौद्धिक प्रकार, तर अधिक उनि तपाईं र बाडा तपाईं शान्त गर्न सक्छन् तपाईं यति हो भन्दा जग छ जो. तपाईं आफैलाई भन्दा कान्छा कसैले लागि जान सक्छ, वा जो तिनीहरूले भन्दा कान्छो कार्य.
क्यान्सर मा Venus: तपाईं सबै अरू माथि कसैसित एक भावनात्मक सम्बन्ध आवश्यकता. तपाईं भावनात्मक तपाईं खोल्न सक्ने एक साथी चाहनुहुन्छ, समर्थन र प्रोत्साहन, तर पनि आफ्नो सान्त्वना क्षेत्र को बाहिर तपाईं धक्का हुनेछ. तपाईं त हरेक अक्सर आफ्नो साथी संग केहि संभावना लिन छैन भने सम्बन्ध सुस्त प्राप्त गर्न सक्छन्. तपाईं सम्बन्ध मा एक बाबुआमा हुन लागि झुकाव लागि हेर्नुहोस्.
लियो मा Venus: तपाईं सम्बन्ध मा स्टार हुनुपर्छ, त्यसैले तपाईं ध्यान दिनेछ गर्ने साथी र तपाईं आवश्यकता प्रशंसा. तपाईं प्रेममा समय मा एक सानो स्वार्थी हुन सक्छ, तर तपाईं न्यानो र भावुक साथ हो, र आश्चर्यजनक वफादार. तपाईं आफ्नो मनपर्ने रोमान्स उपन्यास या फिलिम देखि केहि जस्तै हुन प्रेम चाहन्छु, र धेरै रोमान्टिक हो.
कन्या मा Venus: तपाईं व्यावहारिक र जिम्मेवार छ जो कुनै आवश्यकता, र जो तपाईं आफ्नो समय लेओस्. तपाईं संग हुन कसैले छान्दा हतार गर्न चाहँदैनन्, र निश्चित यो पहिलो ठीक गर्न चाहनुहुन्छ. तपाईं प्रेममा एक सानो लजालु हुन सक्छ, र पहिलो कदम बनाउन तिनीहरूलाई हुन सक्छ. तपाईं सम्बन्ध चिन्ता जब तपाईं आफ्नो स्नायु शान्त सक्ने एक साथी आवश्यकता.
तुला मा Venus: तपाईं प्रतिबद्धता गम्भीरतापूर्वक लिन्छ कुनै आवश्यकता, तपाईं पक्का किनभने. त्यहि समयमा, तपाईं बढ्न सम्बन्ध मा अन्तरिक्ष को एक निश्चित राशि राख्नुपर्छ, र तपाईं सम्बन्ध सधैं राम्रो प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर बुझ्ने जो कसैले चाहनुहुन्छ. तपाईं रोमान्स र शिष्टता कदर, र आदर र एक बराबर रूपमा व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ.
वृश्चिक मा Venus: तपाईं भावुक छ जो कुनै आवश्यकता तर जो आफ्नो तीव्रता ह्यान्डल गर्न, तपाईं प्रेम कहिलेकाहीं भारी हुन सक्छ किनभने. तपाईं बुझाना वा आफ्नो साथी अपनाउँछन् सक्छ, नियन्त्रणमा व्यवहार वा तिनीहरूलाई हेरफेर, के तपाईं कसैसित हुनु अघि कि काम गर्न वा तपाईं उनलाई दूर धक्का छौँ लागि त यो महत्त्वपूर्ण. तपाईं बलियो लाग्न गर्ने शक्तिशाली मानिसहरूलाई आकर्षित हुनुहुन्छ.
धनु मा Venus: तपाईं साहसिक हो जो कुनै आवश्यकता, साहसी, र तपाईं संग हाँस्न सक्छु. तपाईं पनि गम्भीरतासाथ प्रेम गर्दैनौं, त्यसैले तपाईं प्रेम अधिक व्यावहारिक छ जो कुनै आवश्यकता, र तपाईं पनि धेरै आवारा गरौं छैन. तपाईं कसैसित शारीरिक सम्बन्ध आवश्यकता, र एक भावनात्मक एक पनि महत्त्वपूर्ण छ सम्झनुपर्ने. अनन्त स्नातक / कानूनी देखाउन सक्छौं यो स्थिति.
मकर मा Venus: तपाईं परिपक्व कुनै आवश्यकता, जिम्मेवार, र प्रेम एक बिट परम्परागत. तपाईं सफल भएका मानिसहरूलाई आकर्षित हुनुहुन्छ, जीवन मा एक उच्च स्थिति प्राप्त गर्न आफ्नो बाटो हासिल वा छौं, र तपाईं ठूलो साझेदार लागि जान सक्नुहुन्छ. तपाईं त परम्परागत छौं भएकोले, सम्बन्ध बासी प्राप्त गर्दैन यसैले केहि मसला ल्याउनेछ व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्छन्.
Aquarius मा Venus: तपाईं आफ्नो व्यक्तिको व्यक्तिलाई आवश्यकता, एक अद्वितीय व्यक्तित्व छ, र बौद्धिक मिल्दछ. तपाईं पहिलो कसैसित मित्रहरुलाई जा रहेको छ जस्तै, र त्यस मित्रतालाई प्रेम सिद्ध जग हो महसुस. समस्या छ, तपाईं एक कठिन समय मित्रता परे जा हुन सक्छ, त्यसैले तपाईं भावनात्मक खोल्न र जोश ल्याउन गर्ने कुनै आवश्यकता.
मीन मा Venus: तपाईं आफ्नो भावनात्मक आवश्यकता बुझ्नुहुन्छ गर्ने कुनै आवश्यकता, तपाईं कमजोर महसुस हुँदा तपाईं रक्षा गर्नुहुनेछ, र तपाईं को लाभ लिने छैनन्. तपाईं प्रेम कसैको लागि केही गर्न छौँ, र सजिलै कारण को संचालित गर्न सक्छ. हृदय मा यस्तो रोमान्टिक हुनु, तपाईं कुनै अधिक व्यावहारिक र जग आवश्यकता. तपाईं कलात्मक प्रकार आकर्षित हुनुहुन्छ.